Umthandazo woNyaka oMtsha woSuku Discover ➡️ Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukubhiyozela uNyaka oMtsha ngokufanelekileyo, kubalulekile ukuthatha imizuzu embalwa ukubulela uThixo, yiyo loo nto ingezantsi kweli nqaku uzakufumana Ukuphela koMthandazo woNyaka.
Ukuqala unyaka ugcwele ukholo nothando
1 Ukuphela koMthandazo woNyaka
2 Iidiliya ezilishumi elinambini
3 Ezinye zeNkcubeko zeMinyaka eNtsha
4 Ukuphela koMthandazo woNyaka
Ekupheleni konyaka, izigidi zabantu kwihlabathi liphela zineendlela ezahlukeneyo zokumelana nokuvalelisa konyaka kwaye ngenxa yesi sizathu amawaka amasiko enziwe ukuba aziwe.
Ezi zithethe ziyakwazi ukwahluka kwiindawo ezahlukeneyo, ezinye iintsapho ziyahlangana ukuze ngale ndlela zifumane unyaka zibhiyozela zonke kunye. Kwelinye icala, abantu abaninzi bathatha isigqibo sokubhiyozela olo suku kwiivenkile zokutyela apho banokungcamla imenyu yeKrisimesi.
Isidlo sangokuhlwa, nangayiphi na imeko, iya kuba kukutya okwenziwe kakuhle, kubekwe ngokufanelekileyo etafileni ukuze amalungu osapho ahlale phantsi kubo kwaye babe nobusuku obumnandi. Kodwa ke, ukongeza kwezo zinto, kukho abantu abazinikezela okomzuzwana wobusuku ukuze baqhubeke Ukuphela koMthandazo woNyaka.
Iidiliya ezilishumi elinambini
Ukutya iidiliya ezilishumi elinambini ngoEva woNyaka oMtsha kuyisiko laseSpain eliza kuthi kungekudala emva koko lifumaneke lisasazeka kumazwe amaninzi emhlabeni; Ngokwesiko, iqulethe ukutyiwa kweediliya kwisingqi ngasinye ezinzulwini zobusuku.
Imvelaphi yayo ibuyela kwinkulungwane ye-XNUMX, ngelo xesha kwakukho ubuninzi beediliya ezivela eAlicante naseMurcia. Nje ukuba isidlo sangokuhlwa siphele, uninzi lwabantu lulungiselela ishumi elinambini lomntu ngamnye kubo kwaye bajolise ekubhiyozeleni ukufika konyaka omtsha ngokwenza i-toast ne-champagne okanye i-cider ukwenza iminqweno yabo emihle bazazise bona nabantu. ubangqongile.
Nje ukuba kwenziwe oko, abanye bayokufowuna abantu abakude, kodwa njengoko besesitshilo ngaphambilana, abanye abantu abaninzi bathatha ixesha lokunikezela okomzuzwana kuThixo, beqhuba Ukuphela koMthandazo woNyaka esiza kuyazi kamva.
Ezinye zeNkcubeko zeMinyaka eNtsha
Kuyaziwa ukuba amawaka amasiko kunye neenkolelo ezikhoyo ekufikeni konyaka omtsha ziye zenziwa kwihlabathi liphela, apha siza kukhankanya ezinye:
Okokuqala, ukusetyenziswa kwamakhandlela aluhlaza kuthiwa kuzisa uxolo ekhaya.
Ukuphuma egumbini kwaye ujikeleze ibhloko kunye nesutikheyisi kuqinisekisa abo benza oko ukuba kunyaka olandelayo kuya kuba kugcwele kukuhamba.
Kuthiwa ukusetyenziswa kwamakhandlela abomvu kuya kuzisa inkanuko.
Ukubeka amakhandlela aluhlaza kuya kuzisa impilo entle.
Ukutya icephe elimnandi leelensi kwimizuzu yokuqala yonyaka omtsha kuya kuzisa impumelelo.
Amakhandlela amthubi aya kuzisa ubuninzi.
Ukubeka imali kwizihlangu kuyakuzisa ukuchuma kwezoqoqosho kuye nakubani na okwenzayo.
Kwangokunjalo, ukubeka iimpahla ngasemva kubusuku boNyaka oMtsha kubonisa ukuba nabani na owenzayo uyakufumana intabalala yeempahla kunyaka ozayo.
Kwangokunjalo, kuyinto eqhelekileyo ukuqala uNyaka oMtsha ngokusebenzisa iimpahla zangaphantsi ezibomvu ukutsala uthando kunyaka olandelayo.
Yenza i Ukuphela koMthandazo woNyaka ukubulela iNkosi yethu ngokusivumela ukuba siphile unyaka omnye.
Xa kusondela ukuphela konyaka, el mundo Wonke ulungiselela ukufumana unyaka omtsha ngokusekwe emathekweni kunye nakwizinto zomlilo kodwa abantu abaninzi bayalibala ukubulela uThixo; Kungenxa yoko le nto ngezantsi siza kukwazisa Ukuphela koMthandazo woNyaka, ekufuneka uthandazwe nosapho, uluntu, izihlobo okanye nabantu abakungqongileyo.
Umfundi 1: “Nkosi, Thixo, Mnini wexesha elingenammiselo, ungowakho namhlanje nangomso, elidlulileyo, nelizayo. Ekupheleni kwalo nyaka sifuna ukukubulela ngako konke esikufumanayo kuwe.
Enkosi ngobomi nothando, ngeentyatyambo, umoya kunye ilanga, ngenxa yovuyo kunye nentlungu, ukuba kunokwenzeka kangakanani kwaye kungenakuba yintoni. Sikunika into esiyenzileyo kulo nyaka, umsebenzi ebesikwazi ukuwenza, izinto ezidlule ezandleni zethu kunye noko sikwazi ukwakha kunye nabo.
Umfundi 2: Sikwazisa kubantu esibathandayo kwezi nyanga zonke, abahlobo abatsha nabadala esidibene nabo, abasondeleyo kuthi kunye nabo bakude, abo basinike isandla sabo kunye nabo sikwazileyo ukubanceda, kunye nathi Yabelanani ngobomi, umsebenzi, iintlungu novuyo.
Kodwa kananjalo, Nkosi, namhlanje sifuna ukucela uxolo, uxolelwe ixesha elilahlekileyo, imali ichithwe, igama elingenamsebenzi nothando olumoshileyo.
Wonke umntu: Uxolo ngemisebenzi engenanto nomsebenzi ombi, kwaye uxolo ngokuphila ngaphandle kwenzondelelo. Kunye nomthandazo wokuba kancinci kancinci umisiwe kwaye ukuza kuthi ga ngoku ndizokukwazisa. Kuko konke ukulibala, ukungakhathali kunye nokuthula, ndicela uxolo kwakhona.
Imizuzu embalwa ngaphambi kokuqala unyaka omtsha, ndibamisa ubomi bam phambi kwekhalenda entsha, nangoku ndingakhange ndikhululwe, kwaye ndinazisa le mihla ukuba nguwe kuphela owaziyo ukuba ndiza kuphila na.
Namhlanje ndicela uxolo novuyo kum nakum, amandla nokuqonda, nokucaca, nobulumko. Ndifuna ukuhlala yonke imihla ndinethemba kunye nobubele, ndiphethe intliziyo egcwele ukuqonda noxolo.
Vala iindlebe zam kubo bonke ubuxoki nemilebe yam ekuxokeni, ukuzingca, ukuluma okanye amagama abuhlungu. Endaweni yoko, vula ubukho bam kuko konke okuhle, wanga umoya wam ungagcwaliswa kuphela ziintsikelelo kwaye uzithululele njengoko ndidlula. Amen. "
Ukuba ulithandile eli nqaku kwaye ufuna ukwazi imithandazo engakumbi yokubulela iNkosi yethu, siyakumema ukuba ufunde le enye malunga Umthandazo wabagulayo beCovid.